सचिवालयमा नेकपाको परीक्षा : ओली र इतर समूहको ‘पोजिसन’ के ?
समस्याको समाधान भनेकै ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्नु हो - खनाल
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको ‘पावर सेयरिङ’को विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले आ-आफ्नो गूटगत भेला तीव्र पारेका छन् ।
बुधवार साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा आ-आफ्नो पोजिसन बलियो बनाएर प्रस्तुत हुने तयारीमा नेताहरू देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार बिहान आफूनिकट सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे । छलफलमा ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै आफ्ना सांसदहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छन् ।
‘हामीलाई सबै हिसाबले तयार रहन प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने ।
पढ्नुहोस् यो पनि - ओलीका ३ रणनीति : सकेसम्म गलाउने, नसके अन्य २ विकल्प !
पार्टी विभाजनका लागि पनि तयार रहनु भन्ने अर्थ बुझ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘विभाजन होइन, पार्टी एक भएर अघि जान जे पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने उहाँको आशय हो । गलत अर्थमा नबुझौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेर आफू शक्तिशाली नै रहेको पुष्टि गर्ने दिशामा कदम चालिरहेका छन् । उनलाई संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन करीब एक दर्जन सांसद अपुग हुन्छ ।
ओलीले आफ्ना नजिकका विश्वास पात्रहरूलाई छलफलमा सहभागी गराएर पूर्वमाओवादी र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरूसँग कुराकानी थालेको बुझिएको छ ।
सांसद महेश बस्नेतले धेरैसँग कुराकानी भइरहेको पुष्टि गरे ।
‘यो सरकारको विकल्प छैन भन्ने सांसदहरूको बहुमत मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि धेरै छ,’ बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पोजिसन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’
बालुवाटारले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने एकसूत्रीय एजेण्डाका साथ अघि बढिरहेका छन् । चार जना नेताबीच निरन्तर छलफल भइरहेको नेपालपक्षीय एक नेताले बताए ।
पढ्नुहोस् यो पनि - ओलीको प्रस्ताव नेपाल पक्षद्वारा अस्वीकार, विनाशर्त सचिवालय र स्थायी कमिटी बोलाउन सुझाव
उनले चारै नेता एकमतका साथ सचिवालयमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच कस्तो खाले समझदारी बनेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘एकमतका साथ अघि बढ्ने समझदारी हो । वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रचण्ड मात्र होइन, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम सबै एउटै एजेण्डाका साथ बैठकमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ ।’
पूर्वएमालेमा उपाध्यक्ष रहिसकेका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको अवस्थामा गुटगत भेला अनावश्यक रहेको बताए ।
‘नेताहरूबीच कुराकानी भइरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई पार्टी विधान र विधिसम्मत चल्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा समूहगत भेला जरुरी छैन । शीर्ष नेताहरूले आवश्यकता अनुसार आफ्नो पोजिसन लिएर सचिवालय बैठक फेस गर्नुहुन्छ ।’
प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेताहरूले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छाडेमात्र मान्य हुने बताएका छन् ।
खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘समस्याको समाधान भनेकै ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्नु हो ।’
यसका लागि ओलीइतरका नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको उनले दाबी गरे ।
पछिल्लो समय नेपाल र प्रचण्डबीच ‘पोजिसन’ लिने विषयमा केही नमिलेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
पढ्नुहोस् यो पनि - प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमको 'एक मत' : ओलीको चारोमा नफस्ने !
नेता नेपालले अध्यक्ष पाए सम्झौता गर्न सक्ने चर्चा पनि चलेको थियो, तर नेपालपक्षीय नेताहरूले उक्त चर्चाको खण्डन गरेका छन् ।
‘दुई शीर्ष नेताहरू एकठाउँमा हुनुहुन्छ, जे हुन्छ समझदारीमा हुन्छ,’ नेपालपक्षीय एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
मंगलवार नै बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बुधवारलाई राख्न अध्यक्षद्वय सहमत भएका थिए ।
मंगवार अपराह्न बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी भए पनि बैठक डाकेर सबै समस्याको समाधान बैठकबाटै हल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
ओलीले भने पार्टीभित्रको विवाद शीर्ष नेताहरूको बीचमा छलफल गरेर केही मत्थर पार्ने र त्यसपछि बैठक बोलाउने आशय राखेपनि प्रचण्डले स्वीकार नगरेको स्रोतले बतायो ।
ओलीसँग भेट हुनुअघि प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका थिए । कोटेश्वरमा नेता नेपालसँग भएको छलफलमा कुनै हालतमा पछि नहट्ने समझदारी भएको बताइन्छ ।
‘ओलीले बैठक बोलाएर आफूविरुद्धमा उठेका तमाम प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ, मेरो यही अडान हो,’ नेता नेपालले प्रचण्डसँगको भेटघाटमा भनेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा छलफलका एजेण्डाहरू के–के हुन्छन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी बाहिर आएका छैनन् । तर प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र गौतमले अहिलेसम्म ओलीले गरेको एकलौटीको संयुक्त हिसाबकिताब माग्ने तयारी गरेका छन् ।
ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए चारैजना नेताहरूले संयुक्त रूपमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन् ।